Faahfaahin Laga Helayo Weerar Lagu Dilay Inka Badan Boqol Askari. – Bogga Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Weerar Lagu Dilay Inka Badan Boqol Askari.
Waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay weerar xoog ku gal ah oo lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala Wilaayada Qandahaar ee Konfurta dalka Afghanistan.
Saldhiga lagu qaaday weerarka Ingimaasiga ah ayaa ku yaala degmada Baldak, oo ah degmo ka tirsan Wilaayada Qandahaar,iyadoona Weerarkaan lagu dilay Inka badan Boqol isugu jirta saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka daba dhilifka Kaabul.
Bayaan kasoo baxay Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa lagu xaqiijiyay in weerarkaan xoog ku galka ah ay fuliyeen Afar Mujaahid oo ka tirsan Katiibada Istish-haadiyiinta Imaarada Islaamiga kuwaasi oo lagu kala magacaabo.
1-Musdhaf oo deegaan ahaan kasoo jeeda Wilaayada Qandahaar.
2-Asaddu Llaah oo deegaan ahaan kasoo jeeda Wilaayada Qandahaar.
3-Mumtaaz oo deegaan ahaan kasoo jeeda Wilaayada Qandahaar.
4-Khaalid oo deegaan ahaan kasoo jeeda Wilaayada Qandahaar.
Sidoo kale Bayaanka Imaarada ayaa lagu xusay in Mujaahidka lagu magacaabo Mumtaaz in si amniyeysan muddo Todobo bilood ah ugu dhex jiray safka maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka Kaabul gaar ahaan maleeshiyaatka ku sugan saldhiga la weeraray islamarkaana Mujaahidkaasi uu soo indha indheeyay saldhiga iyo qaabka ugu fudud ee loo weerari karo.
Weerarkan Xoog ku galka ah ee lagu qaaday saldhiga ku yaala Wilaayada Qandahar ayaa socday inka badan Labo Iyo Toban Saac oo xiriir ah,sidoo kale weerarkaasi waxaa lagu burburiyay gaadiid iyo hub uu lahaa maamulka Ridada Afghanistan.